Kutumira mashoko - Bayu Label
Inonyanya kukosha mashoko ekutumira
- Kana iwe uchida kuwana chiratidzo chekuvhara nguva nguva yekuendesa kunyika yako, tapota wedzera zvinhu zvaunoda ngoro yako. Kana iwe ukanyora pa "Cart", iwe uchaona "Kutengesa kuwanda kwekuwedzera". Ndapota uyadza nyika yako uye zip code uye iwe uchawana chiratidzo chekuvhara nguva nguva uye mamwe mashoko.
- Kana ukasarudza "Express Mail Service" (EMS) tinozozvitumira nebhokisi remasuo remashizha. Iwe haungagamuchiri Kuteerera uye Tsvaga Code uye iwe hauzove neinishuwarensi apo purogiramu inorasika. Bayu Tsamba haigoni kupiwa mhosva uye hatibvumi chero mutoro wepakiti.
Kana iyi puroti yakarasika, pane nhamo pasina chatinogona kukuitira.
Ndicho chikonzero nei nzira iyi isingabhadhari
Nguva yekuendesa kuziviswa
- Hatigoni kuvimbisa kana kuita chero upi zvapi zvatichaitika kana purogiramu ichasvika.
Tinogona kungokupa chiratidzo. Nguva yekuendesa inogona kushandiswa nekambani yekutumira uye tsika uye hatigoni kudzora imwe yemasangano aya, zvinosuruvarisa.
- Packages akarayirwa muNetherlands ne Track & Trace asi pasina inshuwarisi inotumirwa nebhokisi yebhokisi mail. Kazhinji izvi zvikwata zvinosvika mukati meZ2 mazuva ekushanda. Zvisinei, muzviitiko zvisingaoneki purogiramu inorasikirwa, PostNL haisi kuzoita tsvakurudzo kuti iwane pepa uye Bayu The Label haigoni kupiwa mhosva.